ဆရာမ – alanlaymyar
ဆရာမလေး ဒေါ်မေသက်အောင် Credit-ဆရာမောင်လမ်းသရဲ အလယ်​တန်းပြဆရာမ​လေး​ဒေါ်​မေသက်​​အောင်​မှာရုပ်​​ချောသည်​။ခန္ဓာကိုယ်​​လည်းလှသည်​။ အသက်​က၂၅နှစ်​အရွယ်​ဖြစ်​သဖြင့်​အလှတရားတို့အစွမ်းကုန်​ဖူးပွင့်​​နေသည့်​အရွယ်​ဖြစ်​သည်​။ ​စေ့စပ်​ထားသူသတို့သား​လောင်းနှင့်​ဒီနှစ်​​နွေရာသီ​ကျောင်းပိတ်​ရက်​တွင်​မင်္ဂလာ​ဆောင်​ရန်​စီစဉ်​ ထားပြီးသားဖြစ်​သည်​။ဆရာမ​လေးမင်္ဂလာ​ဆောင်​မည့်​သတင်းကိုတစ်​​ကျောင်းလုံးမှဆရာများသာမက ​ကျောင်း​စောင့်​၊​ကျောင်းသန့်​ရှင်း​ရေးကပါမကျန်​နှ​မျောတသစုပ်​တသပ်​သပ်​ဖြစ်​ကြရသည်​။ ဒီ​နေ့​တော့အပြင်​တွင်​မိုးဖွဲဖွဲ​လေးရွာ​နေသဖြင့်​ည​နေ​လေးနာရီခွဲပြီဖြစ်​​သော်​လည်းဆရာမ​လေး တစ်​​ယောက်​တည်း​ကျောင်းခန်းထဲတွင်​စာအုပ်​များကိုအမှတ်​ခြစ်​​နေသည်​။ထိုပဉ္စမတန်းအခန်းမှာ အ​ဆောင်​ထဲတွင်​အလယ်​ဖက်​ကျပြီးတစ်​ဖက်​တွင်​ကြက်​ဆူ​တောကြီးသာရှိသဖြင့်​အ​တော်​ပင်​တိတ်​ဆိတ်​ ​နေ​ပေသည်​။ဆရာမ​လေး​မေသက်​​အောင်​အမှတ်​ခြစ်​​နေသည်​ကိုတိတ်​တဆိတ်​​ချောင်းကြည့်​​နေသူ တစ်​ဦးရှိသည်​။ထိုသူက​တော့​ကျောင်း​ဆောင်​​တွေကို​သော့လိုက်​ခတ်​ရင်းဒီ​နေရာသို့​ရောက်​လာ​သော ​ကျောင်း​စောင့်​ကြွက်​ကြီးဆိုသူပင်​ဖြစ်​သည်​။ကြွက်​ကြီးကအသက်​၄၀အရွယ်​မုဆိုးဖိုကြီးဖြစ်​သည်​။ တစ်​ခါတစ်​ရံ​ကျောင်းဝင်းထဲတွင်​သင်​တန်းဆရာမ​လေးများရှိချိန်​တွင်​ဆရာမ​လေးများဧ။်​​ဇာဘော်​လီ၊ ပင်​တီစသည့်​လှန်းထား​သောအတွင်းခံများကိုခိုးယူ၍ဂွင်းထု​လေ့ရှိသည်​။ခု​တော့​တွေ့ပြီ။ စား​နေကျ​ကြောင်​ဖားကြီးနှင့်​အပျိုမဆရာမနုနုထွတ်​ထွတ်​​လေး​ဒေါ်​မေသက်​​အောင်​။ ကြွက်​ကြီးကလည်းဆရာမ​လေး​ဒေါ်​မေသက်​​အောင်​မင်္ဂလာ​ဆောင်​​တော့မည်​ကိုသိ​နေသဖြင့်​ မင်္ဂလာမ​ဆောင်​ခင်​သူ့မျိုး​စေ့ကို​ဒေါ်​မေသက်​​အောင်​ဧ။်​ဗိုက်​ထဲထည့်​​ပေးရန်​အကြိမ်​ကြိမ်​စိတ်​ကူးယဉ်​ ဖူးသူဖြစ်​သည်​။အခုမြင်​ကွင်းကကြည့်​​ကောင်း​နေသဖြင့်​တိတ်​တဆိတ်​​ချောင်းကြည့်​​နေခြင်းဖြစ်​သည်​။ ဆရာမ​လေး​ဒေါ်​မေသက်​​အောင်​ကပိတ်​ထား​သောပြတင်း​ပေါက်​နားမှခုံတန်းရှည်​​ပေါ်တွင်​ထိုင်​၍ အမှတ်​ခြစ်​​နေသည်​ကိုကြွက်​ကြီးကပြတင်း​ပေါက်​သစ်​သားကြားမှနီးနီးကပ်​ကပ်​​ချောင်းကြည့်​​နေခြင်း ဖြစ်​သည်​။ယခင်​ကမသိမသာမျှသာ​ချောင်းကြည့်​ခဲ့ရ​သောဆရာမ​လေး​မေသက်​​အောင်​ဧ။်​ဖင်​လုံးကြီးများ မှာယခု​တော့​ဘေးတိုက်​မကျ၊​ရှေ့မကျအ​နေအထားဖြင့်​တဝကြီးရှုစား​နေရသည်​။ ပင်​တီအရာ​လေးမှာလည်းအသား​ပျော့​ပျော့​ကျောင်းစိမ်းထမိန်​​တင်းတင်း​လေး​အောက်​မှာထင်​ရှားလို့​ နေသည်​။ခါးနွဲ့​လေးမှာတင်းတင်းစည်းထားတဲ့ထမိန်​အထက်​ဆင်​စ​လေးဟာလည်းခါးသားဖြူဖြူ​လေး တစ်​ထွက်​လို့လှပနွဲ့​ပျောင်းစွာနဲ့တင်းယင်း​နေတာ​ပေါ့။ ​ဗြောင်​ထမိန်​​ပျော့​လေးဖြစ်​လို့ဆရာမ​မေသက်​​အောင်​ရဲ့ခါးထစ်​ခွင်​​အောက်​ကကားတက်​သွားတဲ့ တင်​ပါးကြီး​တွေကတအားကိုရုန်းကန်​တင်းထွက်​​နေတာ​ပေါ့။ ကြွက်​ကြီးသည်​ယခင်​ကလမ်းလျှောက်တိုင်းလှုပ်နေတတ်​​သောဆရာမ​လေး​​မေသက်​​အောင်ဧ။်​ ဖင်ကြီးတွေကြည့်ပြီး​​မေသက်​​အောင်​ကိုလွန်​စွာစပ်​ယှက်​ရင်းနှီးချင်​​နေပြီဖြစ်​၍အချိန်​ကို​စောင့်​​ရသည်​ ပင်​စိတ်​မရှည်​ချင်​​တော့။ ဆရာမ​လေး​ဒေါ်​မေသက်​​အောင်​ဝတ်​ထား​သောအင်္ကျီမှာ​လေး​ထောင့်​ဇကာကွက်​​သေး​သေး​လေးများ​ပါ​ ​သောဇာအင်္ကျီပါး​လေးကိုတင်းတင်း​လေးဝတ်​ထားခြင်းဖြစ်​၍အထဲကဇာ​ဘော်​လီကိုအထင်းသားမြင်​​နေ ရသည်​။​​နောက်​ကျောလှဇာ​ဘော်​လီ​​​ကျော​ပြင်​​ပေါ်မှပန်းကနုတ်​​လေးများနှင့်​တင်း​နေ​သော​ဘော်​လီချိတ်​ ​လေးများကိုတလက်​လက်​ဖြင့်​ပြတ်​သားစွာမြင်​​နေရသဖြင့်​ကြွက်​ကြီးကိုယ့်​လီးကိုကိုင်​ထားမိသည်​။ ဆရာမ​လေး​ဒေါ်​မေသက်​​အောင်​ဧ။်​​ဇာ​ဘော်​လီ​လေးကကြပ်​ကြပ်​ဝတ်​ထားသဖြင့်​​ကျောပြင်​​ဝင်းဝင်း​လေး ကလည်း​ဘော်​လီလွတ်​သည့်​​နေရာတွင်​အင်္ကျီပါးပါး​လေးနှင့်​တအားကပ်​​နေသည်​။ ​မေသက်​​အောင်​ဧ။်​​ကျောပြင်​အလယ်​​မြောင်း​လေးတစ်​​လျှောက်​ဧ။်​​ဘေးတစ်​ဖက်​တစ်​ချက်​စီတွင်​ ​ဘော်​လီကြိုး​လေးနှစ်​​ချောင်းကတင်းတင်း​လေးနစ်​ဝင်​​နေသည်​ကို​တွေ့​နေရသည်​။ ဆရာမ​လေး​မေသက်​​အောင်​မှာတစ်​​ယောက်​တည်းရှိသည်​ထင်​၍​နေသာသလိုဖင်​​ကော့ပြီးထိုင်​​နေရာ ခါးပတ်​ပတ်​လည်​မှာလက်​၄လုံးစာမက​ပေါ်​နေသည်​။​ချောမွတ်​​သေးသွယ်​​သောခါး​လေးဧ။်​အ​ပေါ်တွင်​ ​ဘော်​လီ​အောက်​နားစတင်းတင်း​လေးကမြင်​ကွင်းကိုကာဆီးထားပြန်​သည်​။ ထို့​နောက်​ဆရာမ​လေး​မေသက်​​အောင်​မှာအမှတ်​ခြစ်​ပြီး၍ခုံတန်းရှည်​​ပေါ်တွင်​ကြွက်​ကြီးဖက်​သို့လှည့်​၍ ထိုင်​ကာအ​ညောင်းဆန့်​လိုက်​ပြန်​သည်​။ ကြွက်​ကြီးကဆရာမ​​လေးမေသက်​​အောင်​ကိုနီးနီးကပ်​ကပ်​ကြီးပြတ်​သားစွာ​မြင်​​နေရ​သော်​လည်း ဆရာမ​လေးမှာကြွက်​ကြီး​ချောင်းကြည့်​​နေမှန်းမသိရှာ​ပေ။ထို့​ကြောင့်​စိတ်​လွတ်​လက်​လွတ်​အ​ညောင်း ဆန့်​​နေသည်​။​မေသက်​​အောင်​ကလက်​နှစ်​ဖက်​ကိုဆန့်​လိုက်​​သောအခါ​ကျောင်းအင်္ကျီပါးပါး​လေးက တအားတင်းသွားပြီးဇာ​ဘော်​လီရင်​အုံခွက်​​ပေါ်ကပန်းကနုတ်​​လေး​တွေထင်း​နေ​အောင်​​ပေါ်လာသည်​။ ဆရာမ​မေသက်​​အောင်​ဧ။်​​အင်္ကျီရင်​ထပ်​စမှာလည်းတအားတိုသဖြင့်​ဇာပါး​လေးတစ်​ထပ်​တည်းသာခံပြီး ​ဘော်​လီ​လေးနှင့်​မြင်​​နေရသလိုဖြစ်​​နေသည်​။​ဘော်​လီရင်​အုံခွက်​နှစ်​ခွက်​အလယ်​မှချိုင့်​​လေးအ​ပေါ်တွင်​ ပိတ်​ပါး​လေးကရင်​သားနှစ်​အုံနှင့်​တင်း​နေရာ​ဘော်​လီအလယ်​က​ငွေ​ရောင်​ပန်းစ​လေးထိုးထားသည်​ကို ပင်​​ကောင်းစွာမြင်​​နေရသည်​။ဇာ​ဘော်​လီရင်​အုံခွက်​​ပေါ်မှပန်းကနုတ်​က​လေးများမှာလည်းအ​ရောင်​ လက်​လက်​ဖြစ်​​နေသဖြင့်​အလွန်​ထင်​ရှားစွာမြင်​​နေရသည်​။အချုပ်​ဆိုရ​သော်​​ကျောင်း​စောင့်​ကြွက်​ကြီးမှာ ဆရာမ​လေး​ဒေါ်​မေသက်​​အောင်​အား​ဘော်​လီ​လေးပဲဝတ်​ထားပြီးမြင်​​နေရသလိုဖြစ်​​နေသည်​။ […]
ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်တော့ ဆရာမ ရဲ့ ဖြူဝင်းနေတဲ့ ခြေသလုံးလေးတွေ ကို မြင်လိုက်ရ သည် . .။ ဆရာမ ၀ိုင်းစက်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေ ..နှာတန်လှလှလေး . .နှုတ်ခမ်းပြဲပြဲဖူးဖူးလေး..တွေ ဟာ သူ့ ရင်ကို တအားလှုပ်ရှားယစ်မူးစေ သည် လို့ ဆရာ ဦးသိန်းထွန်းနိုင် ထင် သည် . .။ ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည် ကျောင်းဆရာမ မလုပ်ဘဲ ရုပ်ရှင် မင်းသမီး လုပ်ဖို့ကောင်း သည် လို့ ဆရာဦးသိန်းထနွ်းနိုင် ထင် သည် . .။ ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် သူတို့ ကျောင်း ကို ရောက်လာတာ မကြာသေး ။ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် သည် ရုပ် က ချောသည် […]
Posted on October 2, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)
တဏှာကြီးသောဆရာမ “သဲဦး ပြန်ပြီလား´´ “ဟုတ်ဆရာမ…အိမ်မှာ အဖေတစ်ယောက်တည်းမို့´´ ဆရာမသဲဦးသည် အမှတ်၂ ရပ်ကွက်၌ တိုက်ခန်းငှားနေသည်။အဖေရောဂါသည်ကြီးကိုပြုစုရသည်။ဆရာမသဲဦးမှာ အသက်၂၀ကျော် ခပ်ချောချောဖြစ်သည်။သူ့အဖေသည် အသက်၅၀ကျော် ခြေထောက်များကိုလေဖြတ်ထားသည်။ဆရာမသည် သဘောကောင်းသူဖြစ်၍အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများသူ ဖြစ်သည်။ကျောင်းမှ ဆရာ ဆရာမများကလည်းချစ်ခင်ကြသည်။ဆရာမများကျောင်းအားလပ်ရပ်များတွင် ဆရာမသဲဦးကိုကူညီရင်း ဆရာမသဲဦးအိမ်တွင် ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြသည်။အဘိုးကြီးကို ဝိုင်းဝန်းပြုစုကြသည်။ဆရာမ၏အခင်မင်ရဆုံး မိတ်ဆွေမှာ ဆရာမဒေါ်စုလှိုင်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်စုလှိုင်သည် ဆရာမသဲဦးငယ်နှင့် ဘဝချင်းတူညီသူဖြစ်သည်။ဒေါ်စုလှိုင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် မိဘများဆုံးပါးခဲ့ရာ ဆွေမျိုးများကပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ယခုအခါ မြို့ကျောင်းတွင်တာဝန်ကျ၍ အဆောင်တွင် နေထိုင်ရသူဖြစ်သည်။ဒေါ်စုလှိုင်သည်အခြားဆရာ ဆရာမများနှင့်မတူ အဆို အက မယ်ပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိသူဖြစ်၍ ကျောင်းပွဲများရှိလျှင်ကျောင်းသူများကိုအဆိုအက သင်ပေးရသူဖြစ်သည်။ပါးတွင်သနပ်ခါးလေးများပါးပါးလိမ်း၍ သူ၏နက်မောင်လှသောဆံပင်များကို ထုံးထားသည်မှာခန့်ညားလှသည်။နေ့ခင်းအချိန်များသည် ဆရာမဒေါ်စုလှိုင်၏ ကိုယ်လုံးအလှဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ဆရာမ၏ကျောင်းစိမ်းအကျီ င်္မှာအလွန်ပါးလွှာသည်။မနက်ကျောင်းလာလျှင်လက်ရှည်အကျီ င်္အပါးကိုအပေါ်မှ ဝတ်လာသော်လည်း နေ့ခင်းအချိန်တွင် အပေါ်အကျီင်္ကိုချွတ်၍နေတတ်သည်။ထိုအခါ ကျောင်းအကျီ င်္အဖြူရောင်အောက်မှာ ထင်ရှားလှသောအနက်ရော်မြန်မာဘော်လီနှင့် ဝင်းဝါလှသောနို့အုံကြီးများကို အထင်အရှားမြင်ရချိန်ဖြစ်သည်။ဆရာမ၏နို့အုံအပေါ်မှ မှည့်သီးအမည်းလေးသည်လည်း မြင်သမျှယောကျာ်းတိုင်းအား စိန်ခေါ်နေသလိုဖြစ်သည်။ဆရာမဒေါ်စုလှိုင်သည် […]
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဆရာမ ကျတော်ချစ်တဲ့ ဆရာမလေး တနေ့ကျော်စွာတယောက်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ကျော်စွာမိဘတွေကို စာပြို့ပီးရုံးခန်း ခေါ်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျော်စွာကျောင်းပြေးတဲ့အတွက်ပါ။ ကျော်စွာကျောင်းဘယ်လောက်ပြေးသလဲဆိုရင် တစ်လမှသုံးရက်ထဲ ကျောင်းတက်ပါတယ။် ဆရာကြီးသတိပေးလို့ ကျောင်းပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာ ကျော်စွာအတွက်အရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်လာပါတယ်။ ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစိုတယောက် ကျော်စွာတို့အခန်းထဲကိုရောက်လာတော့ သူတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ ကျောင်းသားလေး ကျော်စွာကို တွေ့လိုက်ပါတယ။်ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစို ကျော်စွာဆီလျှောက်လာပါတယ်။ ကျော်စွာဆီ တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်လာတဲ့ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစိုဟာအရမ်းလှပါတယ်။ အသားအရေက ဝင်းဝါပီး အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းပါတယ်။ အဖြူရောင် ရင်ဖုံး အင်္ကျီလေးနဲ့ ကျောင်းစိမ်း ထမီလေးကို ခပ်တင်းတင်းလေး ၀တ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဆံပင်ကိုထုံးထားပီး သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေး နဲ့ အရမ်းလှနေပါတယ်။ ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစို ကျော်စွာကိုမေးတယ် မင်းကကျောင်းသားသစ်လားတဲ့ ကျော်စွာပြုံးနေလိုက်တယ။် ဘေးကသူငယ်ချင်တွေကလဲပြုံးလို့ပေါ။့အဲတာနဲ့ဆရာမလေးက မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲလို့မေးတယ် ဘယ်ဆရာ ဘယ်ဆရာမနဲ့မှမတည့်တဲ့ကျော်စွာတယောက်ဆရာမရဲ့အသံလေးကြားတော့ တစ်ခါမှမခံစားဖူးတဲ့ ခံစားမှုမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်။ မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ကျော်စွာပါ အော်ကျော်စွာဆိုတာမင်းလား ဟုတ်ကဲ့ […]